Calligra 3.0: iyo itsva kuburitswa yemahara hofisi suite yave kuwanikwa | Linux Vakapindwa muropa
Calligra 3.0: iyo nyowani kuburitswa yemahara hofisi suite yave kuwanikwa
Mushure menguva yakareba yekuvandudza, Calligra, imwe yemahofisi edu epamoyo pamwe neLibreOffice uye ine vhezheni itsva yakagadzirira. Vagadziri ve KDE vaisa simba rakawanda mukushandisa kugadzirisa mune iyi nyowani kuburitswa kwe Calligra 3.0. Sezvo isu takazivisa nhau dzeLibreOffice uye maUI ayo matsva, tinofarawo kupa idzi nhau dzakanaka nezve iyi inonakidza imwe nzira.
Ehe saizvozvo ivo vari kunze Krita uye Munyori, pamwe nezvimwe zvinonakidza zvakasanganiswa maapplication pamwe neBrainstorm zviri zveichi chikuru chirongwa uye izvo zvakapa zvakawanda zvekutaura nezvazvo nekuda kwehunyanzvi hwavo maficha. Kune avo vachiri kusaziva suite, taura kuti inosanganisa akawanda maapplication atinogona kutarisira kana tikabva kuLibreOffice, OpenOffice, MS Office, nezvimwe. Mienzaniso izwi processor, spreadsheet, chirongwa chekuratidzira, dhatabhesi, nezvimwe.
Vagadziri vakashuma pamusoro pekuchinja, uye vakasarudza deredza huwandu hwekushandisaNaizvozvo, mune iyi vhezheni nyowani, kumwe kunyorera kwakabatanidzwa hakuchabatanidzwazve uye kwave kuzvimiririra, asi kwete zvachose, nekuti ivo vanogona kuita kuti vadzokezve mune ramangwana shanduro dzehofisi suite. Izvo zvavasina kudzikisira hunhu hweiyi suite, iyo kunyangwe isinga zivikanwe seLibreOffice, chokwadi ndechekuti chakakosha senge imwe nzira.
Kune rimwe divi, zvakawanda zvakagadziridzwa uye zvigadziriso zvebug zvakave zvichisanganisirwa zvirongwa zvakavakirwa muCalligra 3.0 suite (yaimbozivikanwa seKOffice). Chikamu chekuvandudza uku kwakabatana neiyo KDE chirongwa uye nemamiriro ekunze, senge tekinoroji qt 5.5, chimwe chinhu chakatora chikamu chakakura chekuyedza kweshanduro iyi nyowani. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve chirongwa, uye kuti uwane kurodha pasi kweiyi suite, unogona kuwana iyo yekuodha nzvimbo yeiyo webhusaiti yepamutemo yeprojekti, uko iwe kwaunowana akati wandei vhezheni dzemapuratifomu akasiyana akadai seMacOS, Linux uye Windows ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Calligra 3.0: iyo nyowani kuburitswa yemahara hofisi suite yave kuwanikwa
Isu tinokuudza iwe zvakawanda nezve Shadow Tactics: Blades yeShogun
Fedora 26 LXQT, iyo nyowani spin ichauya iyi 2017